ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများ စေလွှတ်နိုင်ရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. MARUYAMA Ichiro နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. MARUYAMA Ichiro နှင့် အဖွဲ့အားယနေ့ ညနေ ၁၆:၃၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများ စေလွှတ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှပြဌာန်းထားသည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ စေလွှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလုပ်သင် အလုပ်သမားများ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများစေလွှတ်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အလုပ်သမားသက်သေခံကတ်ပြား (OWIC-Smart Card) များတရားဝင်ရယူပြီး မှသာ စေလွှတ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွမ်းကျင်အလုပ် သမားများစေလွှတ်ခြင်း၊ အလုပ်သင် အလုပ်သမားများစေလွှတ်ခြင်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့် ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း တို့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့် အရေးရပိုင်ခွင့်များ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ စေလွှတ်ရာတွင် ဂျပန်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲများ ထပ်မံစစ်ဆေးဆောင် ရွက်နိုင်ရေး၊ လုပ်သားအရေအတွက် ပိုမိုခေါ်ယူနိုင်ရေးနှင့် လုပ်သားများ ခေါ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ အမြန်ဆုံးစေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြေလျော့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အီဘာရာခီခရိုင် အစိုးရ၊ နာဂါနိုခရိုင်အစိုးရ၊ ဟိုးဂရော့ခရိုင်အစိုးရ၊ ချိဘခရိုင်အစိုးရ၊ အအိချိခရိုင်အစိုးရ နှင့် Nissan Healthcar Food Service Co.,Ltd တို့မှ နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များခေါ်ယူရေး ကိစ္စရပ်များတွင် လာရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံသံရုံး များ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် အလုပ်သမားများစေလွှတ်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ နှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်၊ (အလုပ်သမားရေးရာ ဆိုင်ရာ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။